Ngoku kunokwenza imfashini ukunikela inyama. Olu khetho, njengento yokutya yemifuno, idla ngokuchazwa kukuba abantu abafuni ukubulala izilwanyana. Abantu abanjalo bafumana iindidi ezihlukeneyo zokutya okunomdla kunye neemveliso zityalo, besithi zibenza baphile kwaye banamandla. Kodwa, njengokuba uyayazi, yonke into ibonakalise kwaye ixhamle. Ngoko yintoni na, iikhidi yemifuno yokutya okuhlukeneyo? Ziziphi iimpawu zayo, iinkonzo kunye neengxaki?
Imifuno yokutya yemifuno yokutya ehlukeneyo iyahluke kakhulu. Ngoko ke, kuyimfuneko ukuthetha malunga nento yonke ngokubanzi kunye nokuqonda yonke imiba yesondlo. Ngoko, kutheni abantu bebaxhamli bezityalo zemifuno? Kukho izizathu ezininzi zezi. Abanye banokunyamekela impilo, omnye umntu ucinga ukuba ukuba imodeli, ngoko yintoni kanye okufuneka uyenze. Kwakhona, kukho abantu abangafuni ukutya inyama ngenxa yeemfundiso kunye neenkolelo ezithile. Ewe, eneneni, kwihlabathi lanamhlanje, ukutya okunjalo kuyaziwa kakhulu kwaye kuyathandwa kakhulu, kodwa, kukuhle kangakanani? Ngoko, eneneni, kukho iintlobo ezahlukeneyo zokutya. Ukuba udla ukutya kuphela kunye nantoni na enye-ke wena ungumntu onamathela kwisondlo esiqinileyo semifuno. Kodwa indlela ye-lax, ukutya okuhlukeneyo kukuvumela ukuba udle iintlanzi kunye nevenkile zaselwandle. Kwakhona, kukho iinjongo ezifana ne-lactovegetarianism kunye ne-ovolacto-vegetarianism. Kwimeko yokuqala, xa ukhetha ukutya okuhlukeneyo, abantu banelungelo lokutya ubisi, kwaye kweso sibini - namaqanda. Ukuba umntu ufuna "ukwamkela" uhlobo oluqinileyo lwemifuno, udla izityalo eziluhlaza kwaye akukho nto. Abantu abanjalo abazi ukuba babilisiwe kwaye bapheka imifuno, kungabhekiseki ukuba bakhiweyo okanye baphekwe kwezinye ialadi.
Kukho imveliso yokutya yemifino apho abantu benqabela, kungekhona ngokusemgangathweni, inyama, kodwa kulunye uhlobo lwenyama. Kakade ke, ngokuqhelekileyo, olu hlobo lwesityalo lubonakala ngenxa yeenkolelo zonqulo. Kodwa, mhlawumbi umntu akanakudla uhlobo oluthile lenyama.
Kodwa ziphi ukungalungi kwenyama kwaye kutheni abantu benqaba ukuyidla ngenkani kangaka? Oku kunokwenzeka ukuba, inyaniso kukuba abantu abaninzi bayazi malunga nobukhulu be-cholesterol kwimveliso yenyama. Nguye ongcolisa umzimba kwaye ukhokelela kwizifo ezininzi. Kwakhona, siyazi ukuba ngasemva kwezilwanyana kukho iindawo zokuzolisa ezikhethekileyo, i-hormone kunye ne-antibiotics. Zichaphazela izinga lokuphuhliswa kwezilwanyana kunye nokuchasene nesifo. Kakade, kwinqanaba elithile oku kuhlanganiswa. Kodwa, ngelo xesha, kunye neqhinga. Abantu abafuni ukungena emzimbeni wabo, kunye nomzimba, izinto ezinobungozi ezahlukeneyo. Kwakhona, emva kokubulawa kwezilwanyana, isidumbu siyaphathwa nge nitrate kunye ne-nitrines, enesiphumo esibi kumzimba womntu.
Yingakho ukutya kokutya kumntu kubonakala kungcono kunokutya.
Abagadi bezityalo bathi into ephambili kukuba ukulinganisela ngokufanelekileyo ukutya okunomsoco ukuze zonke iivithamini ezifunekayo kunye neemaminerali ziwele emzimbeni. Kwakhona, ukuba umntu udla ukutya kuphela, emva kwexesha umzimba ulahla i-toxins kunye ne-toxins. Ngaloo nto, ziyizona zibangela ubunzima obunzima, izifo ze-cardiovascular, isifo sikashukela, uxinzelelo lwegazi kunye nokubonakala kweentsimbi zamathambo. Kubo bonke abahluphekileyo kwizifo ezinjalo okanye abasengozini yokuvela kwabo, izityalo zicebisa ukuba zitshintshe ngokukhawuleza ukutya kokutya. Baqinisekile ukuba ngokukhawuleza imeko yomzimba wabantu abanjalo iya kuqala ukuphucula, kwaye impilo iza kulungiswa, ngaphandle kokuba ibuyele ekudleni isondlo. Ngendlela, imifuno iyona nto inamandla kakhulu kwaye inokuthintela ukulwa nomhlaza.
Kodwa, ke, zonke iindidi zineenkcaso. Iqulethwe kwinto yokuba umntu uqala ukungabikho izinto ezithile ezifunekayo ukuze agcine imeko eqhelekileyo yomzimba. Kodwa, oku akubangelwa kukuba umntu akayidli inyama, ngokuchasene nabaninzi abachasene nemifuno. Kunzima kakhulu, xa abantu bengabandakanyi ngokupheleleyo isinyithi, iprotheni kunye namanye amavithamini kunye neemaminerali ekudleni kwabo. Ngenxa yolu vavanyo emzimbeni womntu, i-thyroid gland iqala ukusebenza ngokungalungile, ekhokelela kwisifo se-metabolic disorder. Kule meko, abafazi baqala ukuphucula umjikelezo wesini kwaye bahlakulele i-gastritis. Ngako oko, kufuneka kukhunjulwe ukuba akukho nto ifanele iphathwe ngentshiseko, kwaye nayiphi na ukutya, eqhelekileyo okanye imifuno, kufuneka ihlale ichaneke ngokupheleleyo.
Ukuba ibhinqa ifuna ukuba ngumhlaza, akufanele kususe ngokukhawuleza yonke imveliso yenyama ekudleni kwayo. Okokuqala, kufuneka nje ukunciphisa inani lokutya kwenyama kwaye ukwandise imifuno kunye nokutya kweziqhamo. Ikhishi kufuneka iqule ukutya okulula. Kungcono ukujongana nokutshintshwa okufanayo entwasahlobo nasehlobo, xa kukho iziqhamo ezininzi kunye nemifuno. Ukuba uhamba ngokukhawuleza kwaye ngokuthe ngcembe, ngolunye usuku awuyi kufuna inyama, kuba umzimba uya kuziva ukuba akusadingeki ukuba kugcinwe ibhalansi yangaphakathi, amandla kunye namandla. Kodwa, kuyimfuneko ukuhlaziywa kungekhona kuphela ngokomzimba, kodwa nangokwengqondo. Kufuneka ufunde ukuqonda kwaye wamukele imifuno oyifunayo ukuba ungayidli ngenxa yokuba iluncedo, kodwa kuba iyinandi. Awukwazi ukuphatha ukutya kwemifuno njengesondlo esingqongqo. Musa ukuziphikisa zonke inyama, ukuhleka usulu kwi-psyche yakho kunye nomzimba wakho. Ukuba ufuna i-sausages okanye i-cutlets-ke kufuneka uyidle kwaye ungakhethi izinto ezingenangqondo. Umzimba kufuneka ungenqweneli ukufuna ukutya kungekhona kuphela ngokomzimba, kodwa nangokwengqondo. Kuze kube njalo, ungenzi ubundlobongela obuntwini bakho. Akukho mzekelo ongenakukwazi ukufikelela kwisondlo esingqongileyo. Njengoko sele kukhankanywe ngasentla, kushiya umzimba ngaphandle kwamavithamini amaninzi kunye neemaminerali eziyimfuneko. Ngako oko, kuhlale kuyimfuneko ukugqiba ubisi, amaqanda kunye neentlanzi zaselwandle. Isidlo esilungeleleneyo kuphela siya kunceda umzimba wakho kunye nempilo, kwaye ungabi nengozi.
Iipropati eziwusizo zepilji
Isaladi ezitshalayo, izinto ezintsha malunga nokuphambili
Isondlo esifanelekileyo kwabasetyhini abangaphezu kweminyaka engama-45 ubudala
Ialadi ezihlwaya kakhulu kwaye zisebenzayo
Ubisi kunye nemveliso yobisi yobunzima kwimpilo yabantu
Ukutya okunempilo kubantwana kwiikhizi zobisi
Indlela yokwenza isitayela sangaphakathi: 5 amacebo okuyila
Izindlela zamasiko zonyango zokunqongophala
Unyaka we-tiger ozelwe ngonyaka